तपाइँ तपाइँको घरपालुवा जनावर भन्दा तपाइँको एप्पल कार्डको बढी ख्याल राख्नु पर्छ क्रिएटिव अनलाइन
तपाईको घरपालुवा जनावरलाई पनि उत्कृष्ट डिजाइन गरिएको एप्पल कार्ड जत्तिकै हेरचाहको आवश्यकता छैन
यदि एप्पल कार्ड क्रिएटिभ्स अनलाइनको यी लाइनहरू पार गर्दछ भने, यो हो यसको उत्तम डिजाइनको लागि। हामी लगभग भन्न सक्छौं कि कोही पनि यो कार्ड राख्न चाहन्छन् विशेष गरी यसको ख्यालमा यसको विवरणहरू छन्।
एक कार्ड जुन संयुक्त राज्य अमेरिका मा पहिले नै उपलब्ध छ र त्यो आफैमा डिजाईनको सुन्दरता हो। केवल एक कि तपाईं आफ्नो घरपालुवा जनावर भन्दा बढी उनको देखभाल गर्न हुनेछ। र अब तपाईं तल यसको कारणहरू देख्नुहुनेछ।
यस कार्डको डिजाईन लगभग अद्वितीय छ, जबकि यसको राम्रो रखरखाव आवश्यक छ र हामी कहाँ लिन्छौं भनेर सँधै सचेत रहन्छ। त्यो हो, तपाइँको प्यान्ट जेब वा छाला वालेटमा यसलाई राख्न बिर्सनुहोस्। के देखिन्छ जस्तो देखिन्छ, कपडाको साथ सम्पर्क गर्नुहोस् जस्तै छाला वा डेनिम यसले स्थायी विकृति पैदा गर्न सक्छ।
यदि हामी कृत्रिम कपडाबाट बनेको वालेटमा जान्छौं भने सबै कुरा पूर्ण छ। केवल कुरा जुन तपाईंले ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ कि यो तपाईंको अन्य कार्डहरूसँग सम्पर्कमा आउँदैन जुन तपाईं भाग्नु हुन्न। ती inopportune साना पट्टिहरु। र कुरा यो हो कि तपाइँले यो भुल्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँसँग तपाइँको वालेटमा यो छ र केही हप्ताको मामलामा यो अति प्रयुक्त देखिन्छ जुन धेरै प्रयोग भएको देखिन्छ।
त्यो भनेको बिना नै जान्छ कि तपाई यसलाई कुञ्जी र अन्य वस्तुहरूको साथ झोलामा राख्न बिर्सनुभयो सम्भावित घर्षण मानौं तपाईंसँग चुम्बक बन्द छ, तपाईंसँग अर्को भन्दा समस्या हुनेछ। यसको सफाईको साथ पनि यस्तै हुन्छ, किनकि तपाईं घरमा भएको कुनै पनि क्लीनर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछैन। तपाईलाई रबिंग रक्सी चाहिन्छ।
आउनुहोस्, अन्तमा हामी बाँकी एप्पल उपकरणहरू जस्तै बस्छौं। तिनीहरूसँग उनीहरूको उनीहरूको हेरचाह छ र ती विशेषको भन्दा बढी छके यो सबै एप्पल ब्रान्डको कारणले हो? हैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » तपाईको घरपालुवा जनावरलाई पनि उत्कृष्ट डिजाइन गरिएको एप्पल कार्ड जत्तिकै हेरचाहको आवश्यकता छैन
र ती केकहरू जस्तो सुन्दर थियो जुन उनीहरूलाई सुई र धागो द्वारा काताइएको थियो
जब तपाइँ तपाइँको कलाको लागि तपाइँको खाना कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ